वीरञ्ज, ३ असोज – भारतबाट लुकाइछिपाइ नेपालतर्फ ल्याइरहेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल भन्सार सुरक्षा गुल्म वीरगञ्जले आज बिहान लागुऔषधसहित एक जना नेपालीलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा स्याङ्जा जिल्लाको पुतलीबजार नगरपालिका–२ देवीस्थान बस्ने ३८ वर्षीय दीपक कुँवर रहेका छन्। कुँवरले भारतब...
अबुधाबी, २ असोज – अफगानिस्तानले एसिया कप क्रिकेटमा पाँच पटक च्याम्पियन भइसकेको श्रीलङ्कालाई सोमबार ९१ रनले पराजित गरेको छ। पहिलो खेलमा बङ्गलादेशसँग पराजित भएको श्रीलङ्का यो हारसँगै एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताबाटै बाहिरिएको छ। युएईको शेख जाइद रंगशालामा भएको खेलमा पहिले ब्याटिङ गरेको अफ...
काठमाडौं, २ असोज – वरिष्ठ हास्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठको पार्किन्सस रोगको सफल शल्यक्रियापछि उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ। अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा श्रेष्ठको बिहीबार सो रोगको शल्यक्रिया गरिएको उल्लेख छ। शल्यक्रिया डा रेशा श्रेष्ठ र डा वसन्त पन्तले गरेका...
सीआईबीका डीएसपीसहित ५ प्रहरी निलम्बित
काठमाडौं, ३० भदौ – कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्या भएको ५३ दिनसम्म प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा अपराधीबारे सुइँकोसमेत पाउन सकेको छैन। बलात्कारपछि हत्याको जिम्मेवारीपूर्वक अनुसन्धानमा नगरेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ५ जना प्रहरी निलम्बनमा परेका छन्। घटनाक...
सिन्धुली, १ असोज – हतकडीसहित फरार एक अभियुक्तलाई प्रहरीले ११ दिनपछि पक्राउ गरेको छ। सुनकोशी गाउँपालिका–३ रातमाटाबाट फरार भएका सञ्जय परियारलाई प्रहरीले गएराति बसपार्कबाट पक्राउ गरेको हो। सर्लाही ईश्वरपुरा नगरपालिका– ५ का १७ वर्षीय परियार जबरर्जस्ती करणीको अभियोगमा काठमा...
काठमाडाैं १ असाेज – स्व. श्रीकृष्ण श्रेष्ठकाे सम्झनामा निर्माण भएकाे नेपाली चलचित्र 'ए मेराे हजुर २' ले बक्स अफिसमा राम्राे नै व्यपार गरे लगतै झर्ना थापाले 'ए मेराे हजुर ३' निर्माण गरेकी हुन्। सुपरस्टार अनमोल केसीको लिड रोल रहने फिल्म ‘ए मेरो हजुर ३’ मा...
काठमाडौं १ असाेज – किरात राई संस्कृतिमा आधारित चलचित्र ‘सायाबुङ’ शीरफुलको भव्य प्रदर्शनभएको छ। किरात राई यायोक्खा केन्द्रियकार्यालय कोटेश्वरस्थित सुम्नीमाहलमाशनिबार विशेष प्रदर्शनी भएको हो। द ह्वाइट फेसको आयोजनामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा प्रमुख अथिति किरात राई यायोक्खाका क...
काठमाडाैं, १ असाेज – बलिउड एक्टर राजकुमार राव र एक्ट्रेस श्रद्धा कपूरको फिल्म ‘स्त्री’ अघिल्लाे शुक्रवारबाट प्रदर्शनमा आएको छ। कुनै विशेष दिन विना नै रिलिज भएको यो लो बजेटको फिल्मले यतिबेला सिनेमा घरमा शानदार कलेक्सन गरिरहेको छ। फिल्ममा राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर,...
जापान बृद्धबृद्धाको देश! कति पुग्यो जेष्ठ नागरिकको संख्या?
टोक्यो, १ असोज – जापान सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणमा जापानको कूल जनसंख्याको २८ प्रतिशत बुढ्यौली उमेरको रहेको पाइएको छ । बुढ्यौली उमेरको यो अनुपात विश्वकै सर्वाधिक बढी हो। दोश्रो विश्वयुद्ध पश्चात् अत्यधिक जन्मिएका बालबच्चा नै अहिले बुढ्यौली उमेरमा प्रवेश गरेका हुन्। सरका...